Lionel Messi afarta koox ee ugu fiican xilli ciyaareedkii hore
Lionel Messi ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu u dhaqaaqo MLS, halkaasoo uu ku iibsaday daar ka badan 9 milyan milyan.
Chelsea ayaa dhulka ku jiiday Lampard
Shaxda Leicester City – Chelsea
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentine, oo horey u shaaciyay inuu ka tagayo Barcelona, ​​ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Mareykanka ka hor kooxda wiilashiisa ee Newell’s Old Boys, taasoo uu sheegay inay soo laabaneyso ka hor ciyaarta. gabagabo.
Wargeyska Isbaanishka ah ee Diario Sport ayaa shaaca ka qaaday mid ka mid ah afarta koox ee uu Lionel Messi ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe.
Naadiga ugu horeeya ee ay u badan tahay inuu u ciyaaro waa Barcelona, ​​oo sameysa wax walba oo ay ku qancin karto inuu sii joogo, laakiin hadii uu ku adkeysto go’aankiisa inuu baxo, dookhiisa labaad wuxuu noqon doonaa Manchester City, halka Paris Saint-Germain. waa xulashada seddexaad, iyadoo saaxiibkiisa Neymar ee Camp Nou, iyo Angel di Maria, oo saaxiib dhow la ah xulka qaranka Argentina.
Lionel Messi kooxdiisii ​​afaraad waa Horyaalka Mareykanka, oo ay u badan tahay inuu kaga biirayo kooxda Inter Miami, laakiin hadda way ku adag tahay inuu u safro Mareykanka ka hor Koobka Adduunka ee 2022, waana fursadiisii ​​ugu dambeysay. kula guuleysan karo Koob Adduun dalkiisa.
Lionel Messi ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo hadii uu ka tagayo Barcelona, ​​laakiin warbaahinta gobolka Catalonia ayaa sheegeysa inuu sugayo inta ay dhaceyso doorashada madaxtinimo ee kooxda. bilaash ku tagi doono
axadle 5907 posts
Whole evacuates a few of its workers from one
DIIWAANKA CUSUB: Harry Kane & Son Heung-min Oo